Semalt सेयरहरू सबैभन्दा अचम्मको वर्डप्रेस प्लगइनहरू सामग्री भत्काउनका लागि
एक स्क्र्याप गरिएको सामग्री के हो? एक स्क्र्यापर साइट एक वेबसाइट हो जुन विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्दछ, र स्क्र्याप गरिएको सामग्री भनेको सामग्री (पाठ, भिडियो वा छविहरू) जुन इन्टरनेटबाट संकलन गरिन्छ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार निकालिन्छ। स्क्र्याप गरिएको सामग्री त्यसपछि राजस्व सिर्जना गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबिम्बित हुन्छ, प्राय: विज्ञापन मार्फत र प्रयोगकर्ता डेटा बेच्न।
स्क्र्यापर वेबसाइटहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र मूल्य एकत्रितदेखि लिएर शपिंग साइटहरूमा दायरा। गुगल, बिंग, र याहूले इन्टरनेटबाट सामग्री स collect्कलन गर्न, उनीहरूको आफ्नै डाटाबेस, र अनुक्रमणिकामा बचत गर्न र विभिन्न प्रयोगकर्ताहरू समक्ष स्क्र्याप गरिएको सामग्री प्रस्तुत गर्न बिभिन्न स्क्र्यापर्स, बट्स र मकड़ीहरू प्रयोग गर्छन्। यहाँ हामीले स्क्र्याड सामग्री आराम पाउनको लागि उत्तम वर्डप्रेस प्लगइनहरूबारे छलफल गरेका छौं।
१. WP वेब स्क्रेपर:
WP Web Scraper सबै WordPress साइटहरू र ब्लगहरूसँग उपयुक्त छ र मुख्य रूपमा इन्टरनेटबाट डाटा निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। यो प्लगइन कुनै पनि साइटबाट वास्तविक-समय डाटा प्रदर्शन गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ, र तपाईं तपाईंको आफ्नै पृष्ठहरू, पोष्टहरू वा साइडबारमा स्क्र्याप गरिएको सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। WB Web Scraper पहिले उपयोगी सामग्री पहिचान गर्दछ, यसलाई सlects्कलन गर्दछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार स्क्र्यापहरू। तपाईं यो प्लगइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वास्तविक समय स्टक उद्धरण, फुटबल र क्रिकेट स्कोर र सार्वजनिक डोमेनबाट जेनेरिक सामग्री समावेश गर्न। यसले XPath, Regex र CSS चयनकर्ता जस्ता सामग्री क्वेरी गर्न विभिन्न तरिकाहरू समर्थन गर्दछ।
२. साइट बचत गर्नुहोस्:
हामीलाई थाहा छ कि वर्डप्रेस उत्तम र प्रख्यात सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली हो, जुन विश्वभरि हजारौं प्रयोगकर्ताहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईं स्क्र्याप गरिएको सामग्री खोज्दै हुनुहुन्छ भने, सेभ-टु-साइट तपाईंको लागि सही वर्डप्रेस प्लगइन हो। त्यहाँ सयौं प्लगइनहरू छन्, तर यो एक नि: शुल्क उपलब्ध छ र तपाईंलाई राम्रो तरीकाले तपाईंको वेब सामग्री व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। यसले एक सर्टकड प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि वेब पृष्ठबाट जानकारी स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं वेब स्क्र्यापिंग प्रक्रिया स्वचालित गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले चाहानु भए जस्तो धेरै पृष्ठहरूबाट जानकारी निकाल्न सक्नुहुन्छ।
W. WP Scraper Pro:
WP Scraper Pro तपाईंलाई एकै साथ वेब पृष्ठहरू पछाडि स्क्र्याप गर्न अनुमति दिँदछ र तपाईंको समय र उर्जा बचाउँछ। यो एक उत्तम र सब भन्दा अचम्मको WordPress प्लगइन हो र यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री, दृश्य इन्टरफेस मार्फत स्क्र्याप गरिएको सामग्री प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक यूआरएल क्रलरको साथ आउँदछ र तपाईंलाई तपाईंको वेब सामग्री ठीकसँग र द्रुत गतिमा अनुक्रमणिका गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईले लेखहरूलाई ठूलो संख्याका साइटहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार एक पटक वा एक पछि एकमा स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। WP Scraper Pro पूर्व-चयनित प्रकार्यको आधारमा प्रत्येक वेबसाइटबाट ट्याग, शीर्षक, छवि, र कोटी स्वचालित गर्दछ। यसको केहि उत्तम विकल्पहरू लिंकहरू हटाउनुहोस्, स्रोत लिंक र HTML तत्त्वहरू थप्नुहोस्।
W. WP Scraper:
पछिल्लो तर कम्तिमा होइन, डब्ल्यूपी स्क्रैपर एक उत्तम र सबैभन्दा शक्तिशाली वर्डप्रेस प्लगइन हो जुन स्क्र्याप गरिएको सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो प्रयोग-गर्न-सजिलो छ र तपाईंलाई अद्भुत र अपील गर्ने पोष्टहरू र पृष्ठहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ कुनै समय बिना। यस प्लगइनको नयाँ संस्करण भिजुअल ईन्टरफेसको साथ आउँदछ र छिटो छिटो वेब सामग्री चयन गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, तपाईंसँग प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्दैन वा यो प्लगइन प्रयोग गर्न प्रोग्रामिंग भाषाहरू सिक्नुपर्दैन। छविहरू यसको आफ्नै डेटाबेसमा वा तपाईंको पूर्व-परिभाषित मिडिया लाइब्रेरीमा बचत गरियो। तपाईंले भर्खर URL प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र वेब सामग्री लिनु सुरु गर्नुपर्नेछ।